भा’ईरल आमाले किन राजु परियार सं’ग गित गाईनन् ? रा’ती य’स्तो अ’बस्थामा फे ला (हेर्नुहोस भिडियो) – Wow Sansar
भा’ईरल आमाले किन राजु परियार सं’ग गित गाईनन् ? रा’ती य’स्तो अ’बस्थामा फे ला (हेर्नुहोस भिडियो)
यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ भिडियो, काठमाडौं । बङ्गलादेशमा सम्पन्न बङ्गबन्धु शेख मुजिब म्याराथनमा नेपालकी पुष्पा भण्डारीले भारतीय खेलाडीलाई उछिन्दै स्वर्ण पदक जितेकी छिन् ।
PrevPunya Gautamले गित गाउदा आमाछोरी हासेरै मुर्छा, पुण्यले गरे रतिको श्रीमान फर्किन आग्रह Riya Khadka